Aung Win Hein (Noble): 07/07/11
၃. ဘယ်သူကဲ့ရဲ့ ကဲ့ရဲ့၊
၅. တစ်ယောက်တည်း သင့်အောင်နေ။
၆. အကျိုးတရားကို မပွားပါနဲ့၊
၇. ခုကြပ်မှ နောင်ချောင်မယ်၊
၈. ကျင်ကြီးသည် နွေးသည်ဖြစ်စေ၊
၉. သွားတာကို သွားတယ်လို့သိ။
၁၁. သူများ စိတ်မဆိုးအောင်နေ။
၁၄. တစ်စပ်တည်းဖြစ်အောင် ဆောင်ကြ။
၁၅. ပေါ်တိုင်းမပြတ် ရှုမှတ်နေပါ။
၁၆. ငါသည် မုချသေရမည်၊
၁၇. စိတ်ကောင်းရှိဖို့က ပထမ။
၁၈. ကံဆိုတာ အလုပ်၊
၂၀. အကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုတာ ကိုယ်ကတာဝန်ယူရတယ်၊
ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကတော့ ကိုယ်က ဘာမျှကြောင့်ကြစိုက်ရန်မလို၊
သူက ကိုယ့်ကို တာဝန်ယူရတယ်။
၂၁. ပေးပါ၊ ပြန်ရမယ်၊
သို့သော် ပြန်ရလိုသော စိတ်နှင့်မပေးရ။
၂၂. ဘယ်အခါမဆို သေဝံ့အောင်နေ။
၂၃. အမှန်အတိုင်း မသိတဲ့အချိန် လူမိုက်၊
အမှန်အတိုင်း သိတဲ့အချိန် ပညာရှိ။
၂၆. သေခါမှ အရှက်ကွဲရမယ်နော်။
၂၈. ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကို ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း
၃၁. ငါ ဝင်မရှုပ်နဲ့။
၃၂. အသိမှန်မှ အကျင့်မှန်မယ်။
၃၄. သူတပါးရဲ့နှမ်းစေ့လောက်အပြစ်ကလေးကို မြင်တတ်ပေမဲ့
၃၅. သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုကြည့်လွန်းသူဟာ မိမိအပြစ်ကို ဖုံးကွယ်တတ်တယ်၊
မိမိအပြစ်ကို ကြည့်ဖို့တော့ မေ့လျော့နေတတ်တယ်၊
မိမိအပြစ်ကို ကြည့်တတ်ပါမှ သူတစ်ပါးအပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်တတ်မယ်။
၃၆. သူ့ရောဂါ ကိုယ့်မကူးစက်ပါစေနဲ့၊
ရောဂါကူးစက်ခံရရင် မူလရောဂါသည်ထက် ပိုဆိုးတတ်တယ်။